တရုတ်စိတ်ကြိုက်ပုဂ္ဂလိက Label Boxes လက်ကား ၂၅ မီလီမီတာ Mink မျက်တောင်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Weiti
1, HELENA စတိုင် ၂၅ မီလီမီတာရက်စက်မှုကင်းသော mink ကြိမ်ဒဏ်
100% ရက်စက်မှုအခမဲ့ mink သားမွေး
အပြည့်အဝထားတင်ပို့မှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်အပြည့်အဝ set ကိုထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
√လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဒီဇိုင်းနှင့်အလွန်ထူးကဲသော mink eyelash ။
100 ၁၀၀% mink မျက်တောင်များဖြင့်လက်ငင်း glamour ကိုထည့်ပါ။
သင်၏ပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်ကို 3D UV ပုံနှိပ်ခြင်းတွင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန် Eyelash box နှင့် Eyelash Case များရှိသည်။ ကြိမ်ဒဏ်ထပ်မံတောင်းခံပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ဝါဂွမ်းစုတ် + သန့်ရှင်းသောဆီ (အခမဲ့မိတ်ကပ်ဆေး remover) ကို အသုံးပြု၍ ပါးစပ်ဖျားတလျှောက်ကော်ကိုဖျက်ပါ။
သိကောင်းစရာများ - ကော်အရည်ပျော်ဖို့အတွက်စက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ပါ။
အပြင်ဘက်ထောင့်မှစတင်ပြီး၊ သင်၏မမှန်သောမျက်တောင်များကိုသုတ်လိမ်းပါ။ သင်ခုခံနိုင်မှုကိုခံစားရလျှင်၊ ကော်မွှေးကိုဖြေလျှော့ပါ။ ရေနံမဟုတ်သောမိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးကို Q-tip မစုပ်ဘဲ၎င်းကိုမဖြုတ်ရန်သင်ရုန်းကန်နေသည့်တီးဝိုင်းတစ်လျှောက်တွင်မွှေနှောက်ပါ။
ဝါဂွမ်းစုတ် + သန့်ရှင်းသောဆီ (free makeup remover) ကိုသုံးပြီးမျက်လုံးထဲမှပိုလျှံသောကော်များကိုသန့်ရှင်းသောသိုလှောင်မှုထဲသို့ထည့်ပါ။ သင့်ရဲ့ကြိမ်ဒဏ်စိမ်ဘယ်တော့မှဖို့သတိရပါ! သူတို့ကရေနည်းနည်းယူနိုင်တယ်၊ သင့်ရဲ့ကြိမ်ဒဏ်တွေအရမ်းစိုနေရင်သူတို့ပုံသဏ္loseာန်ပျက်သွားနိုင်တယ်။
ရှေ့သို့ ပုဂ္ဂလိက Label ကို False Eyelash Packaging Box လက်ကား 25mm 100% Mink Eyelashes
နောက်တစ်ခု: စိတ်ကြိုက်ဖြစ်သော Eyelash ထုပ်ပိုးပြီးအထူအထူရှိသောလက်ဖြင့် ၂၅ မီလီမီတာ 3d Mink Eyelash
25mm Mink Eyelash ရောင်းချသူ
3d Mink မျက်တောင်ရောင်းသူ
Eyelash Strips များ
YOLANDA စတိုင်အကျယ်ဆုံးလက်ကိုင် Mink စင်း Lashes2...
လက်လီအရောင်းဆိုင် Custom Logo Eyelash Packaging Box 25m ...
Bulk စျေးသက်သာသည့်သီးသန့်တံဆိပ်ဂလင်းပြား ... 25m ...
China Eyelash ထုတ်လုပ်သော Bulk Fake Eyelashes ...
မျက်လုံး, Eyelash ရောင်းချသူ, Eyelash Extensions များ, မျက်ခုံးများ, မျက်စိကွန်း, mink ကြိမ်ဒဏ်,